Urine-controlled video games installed in London bar
အပေါ့ သွားယင်းဆော့ ကစားနိုင်မည့် ဗီဒီယိုဂိမ်းပေါ်လာပါပြီ...
ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံးလို့ ဆိုနိုင်မည့် အပေါ့ သွားယင်းဆော့ ကစားနိုင်မည့် ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်မျိူးကို လန်ဒန်မြို့ ၊
အရက်ဘားတစ်ခုရှိ အမျိူးသားများသန့် စင်ခန်းတွင် တပ်ဆင်နိုင်ခဲ့ ပြီမို့ ရေအိမ်သို့ မဖြစ်မနေသွားရတာ
တောင်မှ ယခင်ကထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းလာမှာအမှန်ပင်ဖြစ်လာပါတော့ တယ်...
ဘယ်လ်ဟမ် အရပ်ရှိ အိတ်စ်ဟီဘစ် ဘားဆိုင်မှ သန့် စင်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဗီဒီယိုဂိမ်းသုံးခုအ
နက်တစ်ခုခုကို ဆိုင်သို့ လာရောက်အားပေးသူများအပေါ့ သွားတိုင်း ဆော့ ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
ရုပ်ချောတယ်၊ သဘောကောင်းတယ်၊ စိတ်ဆတ်တယ်၊ အကြွေးမဆပ်ဘူး...
ရှူရှူပေါက်ယင် အဝေးကြီးရောက်တယ်ဆိုသူများ သက်သေပြနိုင်မည့် ဂိမ်းပေါ်လာပါပြီ...
ဗီဒီယိုဂိမ်းအား ကိန်းဘရစ်အရပ်ရှိ ဘားတစ်ခုတွင် လွန်ခဲ့ သည့် ဂျူလိုင်လလယ်ကတည်းက တပ်ဆင်စမ်း
သပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပြီး လူကြိုက်များကာ ဆွဲဆောင်လျှက်ရှိနေပါတယ်....
အဆိုပါဂိမ်းအားတီထွင်တပ်ဆင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဂေါ်ဒွန်မက်ဆွင်း အနေဖြင့် အစပထမပိုင်းတွင် အများ
ပြည်သူ၊ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မည်ကဲ့ သို့ တုံ့ ပြန်မည်ကို ဝေခွဲမရဖြစ်ခဲ့ ပါသေးတယ်...
သို့ သော်လည်း ကိန်းဘရစ်တွင်တပ်ဆင်ခဲ့ သည့်အဆိုပါဂိမ်းအားစမ်းသပ်ခဲ့ ကြပြီးနောက်တွင်တော့ သူ့ အ
နေနှင့် အမှန်တစ်ကယ်အကျိူးရှိ၊လူကြိုက်များသည့် အရာတစ်ခုအားပြုလုပ်နေခဲ့ သည်ဆိုတာကို သိရှိသွား ခဲ့ ရပါတော့ တယ်...
အဆိုပါအမျိူးသားများရွှေပန်းဖြင့် ရေဖြန်းခိုက် ပျမ်းမျှအသုံးချကုန်ဆုံးချိန် ၅၅ စက္ကန့် ကာလအတွင်း ဗလာ
နံရံ ( သို့ မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားအား ) ငေးမောကြည့် ရှုနေမည့် အစား မီဒီယာအမျိူးအစား
တစ်ခုခုဖြင့်အကျိူးရှိစွာအသုံးချနိုင်ခွင့် အား ဖန်တီးနိုင်ရန် စိတ်ကူးပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
အဆိုပါဂိမ်းမစမီနှင့် ကစားအပြီးအချိန်တိုင်း အရက်ဘားတွင်ဝယ်ယူအားပေးနိုင်သည့် အဖျော်ယမကာတစ်
ဂိမ်းအဆုံးတွင်လည်း ဆော့ ကစားသူများ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု ရမှတ်များအား မိုဘိုင်းဖုံးမှတစ်ဆင့် အင်တာ
နက်စာမျက်နှာ တွစ်တာသို့ တိုက်ရိုက်တင်ပို့ နိုင်သည့် အပြင် ဘ၀တူ ၀ိတ်လျော့ ကြမည့် သူငယ်ချင်းများ
နှင့် လည်း အပြိုင်အဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည့် ရမှတ်များအား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် ပေးမည့် ကြေငြာဘုတ်သို့ 
လည်း ပေးပို့ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
အဆိုပါ အပေါ့ သွားယင်း ဂိမ်းကစားနိုင်မည့် စက်များအား လာမည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်မှ သတ်မှတ်
ရွေးချယ်ထားသည့် နေရာများတွင် တပ်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်...
Going to the loo has never been more fun, after the world's first urine-controlled video game is installed inaLondon bar.
Visitors at the The Exhibit Bar in Balham can play one of three games every time they useaurinal. The video game has been trialled inabar in Cambridge since mid-July and it has proved to be both popular and profitable. One of the game's co-founders, Gordon MacSween, was not sure how the public would react to the game initially. But as soon he saw the game on trial atabar in Cambridge he knew he was on to something good.
The game was designed to createavaluable media opportunity from the 55 seconds the average male spends while he pees just staring atablank wall. There is an advert played before and after the game promotingadrink you can buy at the bar.
At the end of the game, players are encouraged to post their scores via mobile to Twitter and toalive leader board so they can compete with their friends. The units will be rolled-out in selected venues across the UK in early 2012.
Posted by peter kyaw | at 8:01 AM |
The World's Largest Limousine Forget those Humme...
Urine-controlled video games installed in London b...
A Building That Plays Music When It Rains
Boats to abolish sex-for-fish trade in Kenya
Rape victim's choice:12 yrs jail or ...
Faithful dog stays at masters grave ...
Taiwanese man lifts 230 kgs with his 'iron crotch'...
Minister slapped in public
Porn stara'candidate' in student election ...
Four-inch leech found living in boy's windpipe
Male police officer sitting in car sticking out hi...
'Fake doctor boosted woman's bottom with home-made...
Possibility of Your Existence (1 pic)
Saudi women with sexy eyes may be forced to cover ...
Benetton withdraws ad campaign image of Pope kissi...
Towering half-moon hotel shows how oil-rich Azerba...
They used to have the world's most dangerous path ...
အပန်းဖြေစရာ ပုံရိပ်ကမ္ဘာ.... အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဓါတ်ပ...
Nigerian actor freed after 25 bowel movements
Cheat proof: School holds exams in field
Intense Chinese Army Workouts
Pupils forced to slap each other 150...
Risking life and limb to go to school
10-year-old Mexican girl gives birth to baby boy a...
Fans from the blogging community give President Me...
What the Iraq War Could Have Bought Instead
Abnormally Large Animals
Chinese Underground Factory of Fine Food
Viper your nose
အပန်းဖြေစရာ ပုံရိပ်ကမ္ဘာ.... အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဓါတ်ပံ...
Undying love Pair are still holding hands after 1,...
အပန်းဖြေစရာ ပုံရိပ်<!-- /* Font Definitions */ @fo...
Girl has world's longest tongue